Cabdifataax Ibraahim Geesey oo ka qiib galey banaanbaxii maanta wacadna ku marey difaaca lixd gobol ee KG soomaaliya. – idalenews.com
Cabdifataax Ibraahim Geesey oo ka qiib galey banaanbaxii maanta wacadna ku marey difaaca lixd gobol ee KG soomaaliya.
Dibadbax ayaa goordhow ka biloowday magaalada Baydhabo ee Gobalka Baay, halkaasi oo shalay uu ka dhacay Mudaaharad rabshada watay.
Dadka Magaalada Baydhabo oo u waramayay midka mid ah Idaacadaha Muqdisho, ayaa sheegay in Banaanbaxa uu ka socdo Magaalada Baydhabo oo ay shacabka gubayaan taayaro kuna qeylinayaa hal kudhigyo lidi ku ah Shariif Xasan.
Wuxuu itaa ku daray in Magaalada hada xaaladeeda ay tahay Qatar oo dadka dhan ay ka qeyb qaadanayaan dibadbaxa.
Warar hoose ayaa xaqiijinaya in amarka Dibadbaxa uu soo bixiyay C/fataax Geeseey oo kamid ah Wasiirada Maamulka lixda Gobol ee Koonfurta Dalka Soomaaliya, Madoobe Nuunoowna uu umagacaacabay Wasiirka Arimaha gudaha iyo amniga.
Xaalada Baydhabo ayaa ah mid aad ukacsan, waxaana saacad waliba la filan karaan in dagaal uu Magaalda ka dhaco, maadaama ay joogaan halkaasi ciidamo kale oo taageersan Shariif Xasan Sheekh.
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ay ku socoto wadada tii soo martay Magaalada Kismaayo oo rag sheegtay Madaxweynayaal ay ku dirireen oo dhibaato badan ay ka dhasheen.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay wax ka qabato xaaladaha cakiran ee Magaalada Baydhabo, inta aysan talo faraha kasii bixin.
Qaadatashada nidaamka federaalka oo aysan waxbadan shacabka Soomaaliyeed ka fahansaneyn, ayaa waxaa soo baxaya khilaafaadyo sababay Gacan ka hadal, kaa soo sal looga dhigay in shacabka iyo siyaasiyiinta fahan badan ka haysan qaarna si qaldan ay ufahmeen Arinta federaalka.
Daawo Sawirada: banaanbax balaaran lagu diidan yahay imaanshaha shariif xasan oo mar kale ka dhacey Baydhaba janaay.
Ra,iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dhaleeceyay Falkii lagu Xasuuqay Odayaasha.